Fifangaroan’ny Poizina Fitrandrahana Tsy Ara-dalàna sy Kolikoly, Mandravarava Ny Ala Antitra Indrindran’i Eorôpa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Oktobra 2016 3:50 GMT
Dikasarinà avy taminà famelabelarana ‘Clear Cut Crimes (Heloka Bevava anà Fanapahana Mangatsakatsaka)’ avy tamin'ny OCCRP sy ny Tetikasa RISE.
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, namoaka famelabelarana vaovao manadihady ireo vokatry ny fitrandrahana tsy ara-dalàna any Romania sy Okraina, ireo mpanao gazety avy amin'ny Tetikasa Fitaterana ireo Heloka bevava Narindra sy ny Kolikoly ary ny Tetikasa RISE. Manadihady ny tsikombakomban'ireo orinasa tsy ara-dalàna sy ara-dalàna izay mandavarava ny hany farany amin'ireo ala voajanaharytranainy indrindran'i Eorôpa ilay horonantsary, nomena ny lohateny hoe “Clear Cut Crimes,”.
Horonantsary fanadihadiana maharitra 42 minitra ny Clear Cut Crimes, noraketina tao anatin'ny taona iray tany amin'ireo Tendrombohitra Carpathian. Manaraka ny vola ny fanadihadianay, mba anehoana ny heloka bevavan'ny fanapahana ala tsy ara-dalàna, hetsika izay mety hampisy fahapotehan'ny tontolo iainana ary mitentina an-jato tapitrisa dolara ny fatiantoka.
Ny Holzindustrie Schweighofer, orinasan-kazo lehibe indrindra Aotrisiana, no mitana ny toerana ho mpigoka tombotsoa voalohany amin'io fomba fanao io, taorian'ny nanamboarany fotodrafitrasa fikirakiràna hazo mahazaka be any Romania, izay mihoatra lavitra ny fetran-kazo azo tapahana ara-dalàna ao amin'ilay firenena.
Mamoky rafitra mpandrava izay novolavolain'ireo vondrona mpanao heloka voarohirohy aminà fanimbàna tsy ara-dalàna ny ala ny Schweighofer. Ireo vondrona ireo dia mifandray tendro amin'ireo mpanao politika be kolikoly izay manampy ireo jiolahy ireo amin'ny fanitarana ireo fandraharahàny amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny ala. Mampiasa olona mahantra apetrany ho eny alohan'ireo orinasany ry zareo, ary avy eo mandefa bulldozer manavatsava ny rehetra mitsangana eo anoloany, na olona na zavatra. Amin'izany fotoana izany, mipetraka eny an-tsisiny ny fampiharana ny lalàna mandritra ny fitrangàn'ny herisetra.
Adihadian'ilay horonantsary ihany koa ireo ezaky ny “Cosaque Battalion” , vondrona milisy tsy miankina amin'ny fanjakana izay miady manohitra ny jiolahy mpitrandraka ala eny amin'ny sisintany iraisana amin'i Okraina. LAzain'ilay milisy tsy miankina fa “tohanan'ireo tomponandraiki-panjakana be kolikoly any Kiev” ilay tambajotra mpanao heloka bevava voarindra izay manondrana hazo avy amin'io faritra Carpathians io mankany amin'ireo ozinina Romaniàna.
Any Romania sy any an-kafa rehetra any Eorôpa Atsinanana sy Afovoany, nanamafy ireo vokatra mahafatin'ireo tondradrano tato anatin'ireo taona faramparany ny famotehana ny ala. Nanipika ny famakafakana ireo tondradrano tany Bosnia sy Herzegovina, Serbia, Bolgaria, ary Makedonia, fa mety tsy dia ho henjana loatra ireo fiantraikany ireo raha toa tsy notapahana ireo ala teo an-kilany.
Ankoatra ny famokisana ireo indostrian'ny fanorenana sy ny fanaovana fanaka, mifandray mivantana amin'ny fahantrana eo an-toerana ihany koa ny fitrandrahana ala tsy ara-dalàna. Any Makedonia, izay tsy ampy tambajotra mpamatsy entona, maro ireo fianakaviana manao fanapahana tsy ara-dalàna ary mampiasa io hazo mora vidy io mba hanafanàna amin'ny andro ririnina, satria izy ireo tsy manana fahafahana mividy herinaratra na solika fandrehitra. Milalao anjara lehibe amin'io ambaratonga kely io ihany koa ny kolikoly ara-politika.
Ny lahatsary nalaina nialohan'ny fifidianana teo an-toerana ny taona 2009, tao aminà tanàna kely manakaiky an'i Strumica, dia mampiseho ilay kandidà manaiky amin'ny lohany raha miteny ny mpikambana amin'ny antoko kaominista iray eo an-toerana hoe rehefa lany ben'ny tanàna ilay ramatoa kandidà dia ho halalaka ry zareo hanapaka hazo amin'ilay ala tsy lavitra eo. Tsy nandresy tamin'ny fifaninanany tamin'io taona io moa ilay kandidà, Silvana Boneva, mpikambana hatry ny ela tao amin'ny parlemanta.
Nisy horonampeo niporitsaka mampiseho fa nanao antso avo tamin'ireo orinasa (eo amin'ny tanànany sy ireo fantany) ny antokon'i Ramatoa Boneva, amin'ireo fifidianana manaraka. Amin'izao, mpikambana amin'ny Kaomisionan'ny Fifidianam-panjakana izy, izay misahana ny fahatomombanan'ireo fifidianana solombavambahoaka hatao amin'ny volana Desambra.